ပန်းဟေ၀န်ကအင်တာဗျူး (မန်းဂေဇက်ချစ်သူများစာပေဆု) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » ပန်းဟေ၀န်ကအင်တာဗျူး (မန်းဂေဇက်ချစ်သူများစာပေဆု)
Posted by ဦးဦးပါလေရာ on Aug 24, 2012 in Best Web Awards, Creative Writing | 84 comments
အဲဒီနေရာမျိုးမှာ အင်တာဗျူးဖြေရလိမ့်မယ်လို့ တကယ့်ကို ထင်မထားပါဘူး…
ဇတ်လမ်းစတာက အဲ့ဒီကောင် ရဲဘော်ဟောင်း ပေါ့..။
တနေ့က – ကျုပ်ကလဲ စမ်းချောင်း ဗဟိုလမ်းမှာရောက်နေတုန်း ဒီကောင်က ဖုန်းဆက်ပြီး ပန်းဟေ၀န် ကိုခေါ်တယ်။
ပန်းဟေ၀န်ဆိုတာက ဟံသာဝတီလမ်းပေါ် ကားပွဲစားတန်းထွက်ပေါက်နားက လဘက်ရည်ဆိုင်ပါ။
ဒီကောင့်မလဲ နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒတွေကိုယုံမိလို့ သူ့စည်းစိမ်လေး ခပ်ကြီးကြီးပဲ့သွားပြီးကတည်းက
“ကားမျော-မိန်းမပိုက်ဆံနဲ့လိုက်” ရင်း ဆင်ကြံကြံ ကျားချောင်းချောင်း နေလိုက်တာ
တနေ့တနေ့ ကားဝိုင်းနားကကို မခွာဘူး…။
အခုလဲ သူ့ကားတရားကိုမနာချင်တာနဲ့ ဟိုဟိုသည်သည်စကားလမ်းလွှဲရင်း မန်းဂေဇက်အကြောင်းရောက်သွားမိတယ်..။
မန်းဂေဇက်အကြောင်းပြောမိမှတော့ လောလောဆယ်လုပ်နေတဲ့ မန်းဂေဇက်ချစ်သူများစာပေဆု အကြောင်းလဲ ပြောဖြစ်တော့တာပေါ့…။
“ အေးကွာ.. ပါလေရာ ရယ်..။ ဒီလိုမှန်းသိရင် ငါလဲ ဆောင်းပါးလေးဘာလေး ရေးပါရဲ့….. ”
“ မင်းရေးတော့ကော ဘယ်သူကရွေးမှာမို့လဲ ဟဲ့ကောင်ရဲ့….။ ဟိုးအရင်ကွန်မင့်လေးတွေရေးတုန်းကတောင် အဆဲခံရလွန်းလို့ မင်းရွာမ၀င်တာတောင် ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ… ”
“ အဲ မင်းပြောမှ ရွာကိုတောင် သတိရလာပြီ။ မင်းကားထဲ လက်ပ်တော့ပါတယ်မဟုတ်လား။ ခဏ၀င်ကြည့်ရအောင်…၊ ကွန်မင့်လေးတခုနှစ်ခုလောက် အလွမ်းပြေ ရေးလိုက်ဦးမှ…. ”
“ အေးအေးနေလက်စနဲ့ နေစမ်းပါကွာ။ မင်းကားတွေပဲ မရှုံးအောင်ရောင်းဘို့ အာရုံစိုက်ပါ… ”
“ မဟုတ်သေးပါဘူး….။ မင်းဘယ်လိုလုပ် ကပ်တီးကပ်ဖဲ့ဖြစ်နေရတာလဲ…။ ဘာလဲ … ငါစာတွေဝင်ရေးပြီး ဆုကြေးတွေ တထောကြီးရသွားမှာစိုးလို့လား…… ”
“ မင်းက စာရေးမှာမှမဟုတ်ပဲ ရဲဘော်ဟောင်းရယ်..။ ကွန်မင့်ပြင်းပြင်းတွေရေးပြီး ဆော်ပလော်ဘို့ပဲချောင်းနေတာကို။ ပြီးတော့လဲ ဒီစာပေဆုက ဆုကြေးတွေ တထောကြီးလဲ ရစရာမရှိပါဘူး…။ ”
“ ဟုတ်လား…။ ဆုကြေးတထောကြီးမရဘူးဆိုတော့ ဆုကြေးကိုဘယ်လောက်သတ်မှတ်ထားလို့လဲ… ”
“ ဘယ်လောက်မှ သတ်မှတ်မထားဘူး…။ ဆုကြေးအနေနဲ့ ငွေကြေးပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ လစဉ်အကြိုက်ဆုံးအဖြစ်အရွေးချယ်ခံရတဲ့စာမူရေးသူကို နှစ်သောင်းဝန်းကျင်လောက်တန်ဘိုးရှိမယ့် ဆုလက်ဆောင်ကိုပဲ ပေးမှာ…. ”
“ ဟင်.. မဟုတ်သေးပါဘူး…။ အရင်ငါဖတ်မိထားတာက ဆုအတွက် အဘဆွေက တနှစ်တစ်သိန်းထည့်မယ်ဆို… ။ အဘဖေါကလဲ တစ်လတစ်သောင်း ထည့်မယ်ဆို၊ မင်းတို့အဖွဲ့ဝင်တွေကလဲ တစ်လသုံးထောင် ထည့်မယ်ဆို…. ”
“ မင်းပြောတာဟုတ်ပါတယ်…။ ဒါပေမယ့် အဲဒီပိုက်ဆံတွေကို ဆုအတွက်ချည်းပဲ သုံးမယ်လို့ မဆိုလိုဘူး….။ တနှစ်ကိုနှစ်ခါလောက်ခွဲပြီး မန်းဂေဇက်မင်ဘာတွေ တွေ့ဆုံပွဲလုပ်မယ်။ အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ ဆုလက်ဆောင်ပေးမှာ…။ ဆိုတော့… အဘဆွေထည့်ဝင်မယ့်ငွေရယ်၊ အဘဖေါထည့်ဝင်မယ့်ငွေရယ်ကို ဆုလက်ဆောင်ဝယ်ဖို့သုံးမှာဖြစ်ပြီး လိုရင် ကျန်အဖွဲ့ဝင်တွေထည့်ဝင်ငွေထဲက နဲနဲစိုက်သုံးမယ့်သဘောပဲ။ ကျန်အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ထည့်ဝင်ငွေအများစုကို မန်းဂေဇက်မင်ဘာများတွေ့ဆုံပွဲ စားရိတ်အဖြစ်သုံးမှာ…။ ”
“ တွေ့ဆုံပွဲလား… ဆုပေးပွဲလား…. ”
“ တွေ့ဆုံပွဲလို့ပဲ သတ်မှတ်တယ်။ အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာမှ ဒီစာပေဆုချီးမြှင့်တာရယ်၊ အခြားကိစ္စတွေရယ်ကို လုပ်မယ့်သဘောပါပဲ… ”
“ တွေ့ဆုံပွဲဆိုတော့ ဘယ်သူတွေလာရမှာလဲ… ”
“ ဟဲ့ကောင်ရဲ့… တွေ့ဆုံပွဲဆိုမှတော့ တွေ့ဆုံချင်တဲ့သူတွေထဲက လာဖို့အဆင်ပြေသူတွေ အားလုံးလာကြဖို့ပဲပေါ့….။ ဒီကိစ္စရဲ့တကယ့်အကျိုးက အဲဒီပွဲ မှန်မှန် လုပ်ဖြစ်သွားတာပဲ….။ အဲဒီကနေ ဆင့်ပွားအကျိုးတွေ အများကြီးရှိနိုင်တယ်…။”
“ ဟင်… မင်းတို့ဟာကြီးကလဲ…။ အွန်လိုင်းမှာစာရေးတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်မျက်နှာ အမြင်ခံနိုင်သူရှိတယ်၊ မခံနိုင်သူရှိတယ်။ မင်းတို့ဆုကို လူကြားထဲပေးရင် လာမယူနိုင်မယ့်လူတွေ ရှိနိုင်တာပဲ…။ ”
“ စာပေဆုလက်ဆောင်ကို မန်ဘာများတွေ့ဆုံပွဲမှာ လာမယူနိုင်ဘူးဆိုရင် ၊ တယောက်ယောက်ကကိုယ်စားတက်ယူလို့လဲရပါတယ်..။ ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ယူရင်တော့ အဲဒီကိုယ်စားလှယ်ထံက ပြန်ရ/မရ ဆိုတာကတော့ ဆုရသူရဲ့တာဝန်ပါပဲ..။”
“ လာလဲမယူနိုင်ဘူး၊ ကိုယ်စားယူပေးမယ့်လူလဲ မရှိဘူး ဆိုရင်ရောကွာ…… ”
“ အဲဒါဆိုရင်တော့ အကြမ်းအားဖြင့်တော့ ဆုရသူက ဆုလက်ဆောင်ကို စွန့်လွှတ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ ယူဆပြီး သင့်လျှော်သလို ဆက်လုပ်မယ်ပေါ့…”
“ ဟင်… မင်းတို့ဟာကလဲ..။ လာမယူနိုင်ရင်လဲ ဆုလက်ဆောင်ကို ပို့ပေးတာတို့ဘာတို့ လုပ်ပေးပါလား.. ဆင်ပြောင်ကြီး-အမြီးကျမှ….. ”
“ ပို့ပေးဖို့ အဆင်ပြေရင် ပို့ပေးမယ်လို့လဲ သဘောထားရှိပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် အဆင်ပြေမပြေ၊ လုပ်နိုင်မလုပ်နိုင်ပေါ်မူတည်မှာမို့ မဖြစ်မနေပို့ပေးမယ် လို့ မသတ်မှတ်ထားတာပါ။ ”
“ ပို့ပေးလို့ မဖြစ်ရင်ရော…။ အဲဒါဆို အဲဒီဆုလက်ဆောင်ကို မင်းတို့ ဘာဆက်လုပ်မလဲ…. ”
“ လာလဲမယူ၊ ကိုယ်စားလဲမယူ၊ ပို့ပေးလို့လဲအဆင်မပြေရင်တော့ အဲဒီလက်ဆောင်ကို အဖွဲ့ရဲ့သဘောအတိုင်းစီမံမှာပေါ့… ”
“ ဘယ်လိုစီမံမှာလဲ… ”
“ ဘယ်လိုမဆိုပေါ့..။ ဒါက သူများစွန့်လွှတ်ပြီးသားပစ္စည်းမို့ အဖွဲ့ပိုင်ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒါကြောင့် နောက်ပေးမယ့်ဆုတွေအတွက်လျာထားတာ၊ ခဏ ထိမ်းသိမ်းထားတာ၊ ရောင်းတာ၊ သုံးတာ၊ ပေးကမ်းတာ၊ ဖျက်ဆီးစွန့်ပစ်တာ စသဖြင့် အဖွဲ့ရဲ့သဘောအတိုင်း လုပ်လိုက်ရုံပေါ့…။ ”
“ အင်း… အင်း… မင်းပြောတာတော့ ရှင်းသွားပါပြီ။ အဲဒီအကြောင်းတွေ ကြေငြာတာတော့ ငါမဖတ်ရသေးဘူး။ ဘယ်ပိုစ့်မှာ ပြောထားတာလဲ… ”
“ အဲ…. အဲဒါ တိတိကျကျအားဖြင့်တော့ မကြေငြာရသေးဘူးကွ…. ”
“ ဟာ…. ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ပါလေရာရယ်။ မင်းတို့ဆုကြေငြာကတည်းက မရှေးမနှောင်း ကြေငြာထားသင့်တာလေ…။ အဲဒါအဆဲခံရရင် ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိသလဲ… ”
“ ငါ့မှာတာဝန်ရှိတာပါ ရဲဘော်ဟောင်းရယ်..။ ငါက ဆုကြေငြာတဲ့ပိုစ့်မှာ ဆုကြေးအကြောင်း ဆုပေးပွဲအကြောင်းမေးလာရင် ကွန်မင့်နဲ့ဖြေဘို့ စဉ်းစားထားတာပါ။ မမေးလာတော့မှ ကြေငြာမယ်ပေါ့..။ အဲဒါလေး နေ့ရွှေ့လရွှေ့ လုပ်နေမိတာ… ”
“ ဒါထက် ဆုပေးပွဲက ဘယ်တော့လုပ်မှာလဲ…. ”
“ မင်ဘာများတွေ့ဆုံပွဲကို ၂၀၁၃ ဇန်န၀ါရီလထဲ လုပ်မယ်လို့တော့ ခန့်မှန်းထားတာပဲ…. ”
“ တွေ့ဆုံပွဲမှာ အကျွေးအမွေးတော့ပါမှာပေါ့နော်… ”
“ နောက်ပိုင်းတွေ့ဆုံပွဲတွေမှာလဲ အနည်းနဲ့အများ ပါမှာပါ…။ အခုပထမအကြိမ်မှာတော့ အဘဖေါကတ၀က် ကျန်အဖွဲ့ဝင်များရဲ့ ထည့်ဝင်ငွေကတ၀က်နဲ့ ဘူဖေးလေးနဲ့ ဧည့်ခံမလားလို့ စဉ်းစားထားမိတာပဲ…။ ”
“ ဘူဖေးဆိုတော့ လူဦးရေတော့ ကြိုသတ်မှတ်ထားရမယ်ထင်တယ်နော… ”
“ ကြိုသတ်မှတ်စရာမလိုပါဘူး။ အနားနီးရင်တော့ မန်းဂေဇက်မင်ဘာများတွေ့ဆုံပွဲ တက်ရောက်မယ့်လူတွေကို ကြိုစာရင်းကောက်+အတည်ပြု ရမှာပေါ့…။ ”
“ ငါလဲ လာလို့ရတယ်မဟုတ်လား… ”
“ မင်းလဲ မန်ဘာပဲ။ စာရင်းကောက်တဲ့အခါ စာရင်းပေးထားရင် ရတာပေါ့ ”
“ ဒါပေမယ့် လူချင်းလဲမသိပဲ မင်းတို့ဧည့်ခံတာကြီး လာအားပေးရမှာတော့ နဲနဲတော့ အားနာသလိုပဲ…….. ”
“ အဲဒါကတော့ မင်းရဲ့သဘောထားနဲ့ပဲ ဆိုင်တာပဲ ရဲဘော်ဟောင်း….။ အဲဒီအချိန်မှာ ရွာသူရွာသားတွေကို တွေ့ဆုံချင်စိတ်ပြင်းပြနေရင် လာလို့လဲ အဆင်ပြေလွယ်ကူတယ်ဆိုရင် မင်းလာဖို့ကြိုးစားမှာပဲ… ”
ငုံက ရုံးမှာနေရင်း သုံးရတာဆိုတော့ ပို့စ်တွေလည်းမရေးနိုင်ဘူး သူများရေးတာတွေကို တော်တော်များများ
ဖတ်ပေမယ့် Comment ရေးလိုက်ရင် Connection က ကျကျသွားလို့ Comment လည်း မရေးဖြစ်ဘူး
နောက်ပြီး MG ထဲကလူတွေကို ရွာထဲမှာရင်းနှီးနေပေမယ့် အပြင်မှာ တစ်ယောက်မှလည်း သိဘူးးးးး
အဲ့ဒါ တွေ့ဆုံပွဲကိုလည်းတက်ချင်ပါတယ် တစ်ယောက်တည်းကလည်းမလာရဲဘူးးးးးးး ဆိုတော့
ညီမလေးတစ်ယောက်လောက် အဖော် ခေါ်လာလို့ရော ရလားဟင် ….
ကျော့်ကိုလဲ သံချောင်းဘီအီးဆိုင်က အင်တာမူး ဆိုပီး တစ်ဘုတ်လောက် ရေးခွင့်ပုပါနော်..
ဆောဒီးပါ တူ တူမလေးတို့ရေ
သံချောင်းဘီအီးဆိုင် ပိုစ့်မှာ ဂဇက်အဆိုတော်ကြီးနှစ်ယောက်အကြောင်းပါ ပါအောင်ရေး…။
ညီမလေး ဆိုလဲရတယ်..။ တခြားအဖေါ်ဆိုလဲ ရတယ်နော်…..
DEPARKO DEPARKO ရေ
တွေ့ဆုံပွဲလုပ်မယ့်အချိန်ဆို မြန်မာပြည်ထဲ ပြန်ရောက်ချင်ရောက်နေရောပေါ့..။
ကြုံပါ ဆုံပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်ကွယ်…။
ဂေဇက် ဆိုတာကတော့ အသံလဲသာတယ်။ ဟိုးခေတ်တုန်းက အသံလှယ်သုံးတဲ့ အသုံးအနှုံးပေါ့နော…
လာနိုင်ပါစေကွယ်…။ စုစုစည်းစည်း ဆုံကြတာပေါ့..။
အကြောင်းလဲကြားမှာ.. အကူအညီလိုရင်လဲ တောင်းမှာဗျာ….။
ရွာသားတွေဆိုတော့ မမြင်ဖူးသေးပဲနဲ့ကို စိတ်ထဲက ရင်းနှီးပြီးသား….။